Guardiola oo amaan kala dul dhacay mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda Manchester City – Gool FM
Guardiola oo amaan kala dul dhacay mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda Manchester City
(Manchester) 21 Sebt 2019.Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa amaanay mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda Manchester City.
Pep Guardiola ayaa si weyn u amaanay qaab ciyaareedka fiican ee Riyad Mahrez, kaddib markii uu si xoogan kaga bilaawday xilli ciyaareedkan.
Dhinaca kale Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in Riyad Mahrez uu noqon doono mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee kooxda Manchester City.
Riyad Mahrez ayaa wacdaro ka dhigay kulankii ay Arbacadii la soo dhaafay kula ciyaareen kooxda reer Ukraine ee Shakhtar Donetsk tartanka Champions League, kaasoo ay guusha ku raacday 3-0 naadiga Skay Blues, xilli xiddiga reer Algeria uu dhaliyay gool, wuxuuna caawiyay mid kale.
Tababaraha reer Spain ayaa shirkiisa jaraa’id uu ka soo muuqday kahor ciyaarta galabta ay ku wada ciyaari doonaan kooxda Watford horyaalka Premier Leagu wuxuu ku sheegay:
“Riyad Mahrez wuxuu u ciyaaray si fiican xilli ciyaareedkii hore marka laga reebo kulamadii ugu horreeyay”.
“Muddo ayay ku qaadatay inuu la qabsado nolosha halkan, maadaama ay xaalada ka duwan tahay sida uu ku ahaan jirtay Leicester City, halkaasoo uu ku ciyaari jiray weeraro gaadmo ah, laakiin taasi waa waax iska caadi ah”.
“Laakiin wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro kubbadda cagta wuxuuna jecel yahay tababarka, wuxuu kaliya doonayaa inuu markasta la joogo kubbadda. waana jeclahay arrintaas”.
“Haddii uu sameeyo isku day xun, wuxuu doonayaa inuu dib u helo kubbada si uu markale isugu dayo, tani waa faahfaahinta ugu fiican ee ciyaartoyda kooxaha waa weyn”.
Kaka oo aaminsan in awooda Eden Hazard ay soo afjari karto keli-taliska kooxda Barcelona
Tababare Klopp oo war fiican ka helay tababarka kooxda Liverpool, kahor kulanka Chelsea